Kutumira Mota Kubva Kusara Kwenyika KuUK | Yangu Mota Kunze
Kutumira Mota Kubva Kusara Kwenyika KuUK
Isu takavaka bhizinesi redu pakunzwisisa kuti tarisiro yekuunza mota kuUK inogona kutyisa kune vanhu vanosvika pairi kekutanga. Isu tinoziva kuti ruzivo rwakadzama runodikanwa kuti utore danho rekupinza mota kuUK inowanzove yakapararira uye yakaoma kugaya saka isu tiri pano kuzobatsira uye kuve yako imwechete-yekumira sosi.
Tinotenda kuti nekuisa My Car Import neako mota yekupinza unokwanisa kugara pasi uye kuzorora isu tichishandisa bhizinesi redu repasirese kubhizimusi network, ruzivo rwemaindasitiri uye zvivakwa zvekuyedza zveUK kuti kukurumidza uye kudhura-kudzorera iwe nemotokari yako mugwagwa muno muUK.
Isu tine ruzivo rwakakura mukutakura mota kubva kune dzakasiyana nyika dzakasiyana pasi rese. Iwe unogona kuziva zvakawanda nezve yakatarwa nzira yekunze kubva kune dzimwe nzvimbo dzedu dzinozivikanwa pasi rese nekudzvanya kusvika kune rimwe remapeji akakodzera pazasi.
Chikwata chemuno chakazvitsaurira munyika yako kuti chigamuchire mota uye marongero ekutumira kunze
Yakasarudzika kune indasitiri-inogamuchirwa pane-saiti IVA uye MOT kuyedzwa